FBC - Gamtaan Awrooppaa waliigaltee Nuwikilaraa Iraan oolchuuf karoora dinagdee qabxii 9 qabu beeksise
Gamtaan Awrooppaa waliigaltee Nuwikilaraa Iraan oolchuuf karoora dinagdee qabxii 9 qabu beeksise
Finfinnee, Caamsaa 8, 2010 (FBC) Ministiroonni Dhimma Alaa Firaans, Jarmanii fi Yunaayitid Kiingdam Ministeera Dhimma Alaa Iraan waliin ta’uun karoora dinagdee qabxii sagalii waliigaltee Nuwikilaraa Iraan oolchuuf ba’e irratti waliigalan.
Ministiroonni kunniin Pireezdaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp A.L.A Caamsaa 8, 2018 darbe waliigalticha keessaa ba’uusaanii fi qoqqobbiwwan dinagdee cimaa Tehraan irra akka kaa’an ibsuusaaniin wal-qabatee, furmaatawwan filannoo ta’an irratti mari’achuuf kaleessa Biraasals keessatti wal-ga’aniiru.
Hirmaattoonni wal-ga’ii kanaa tarsiimoon kun torbanoota murtaa’an dhufanitti rakkoo faayinaansii biiznasii, sochii baankii fi addaan cituu oomisha boba’aa jiraachuu danda’uuf furmaata qabatamaa akka fidu akka eegamu ibsaniiru.
Karoorichi Iraan waliin hidhata dinagdee itti-fufsiisuu, humna boba’aa fi oomishaalee boba’aa gurguruu danda’uu Iraan mirkaneessuu fi kaampaanota Gamtaa Awrooppaa Iraan keessatti biiznasii hojjatan eeguu dabalatee dameewwan faayinaansii furtuu sagal irratti kan xiyyeeffatedha.
Oduuwwan Biroo « Pirezdaantiin Keeniyaa seera ittisa yakka-saayibarii mallatteessan	Jeettiwwan waraana Israa’el Kaabaa Gaazaatti haleellaa raawwachuu himan »